Ra’iisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa la kulmeysa cadaadis xooggan, kaddib markii uu xisbigeeda uu lumiyay aqlabiyadii uu ku lahaa kuraaasta Baarlamaanka.
Dowlada Ingiriiska oo ku amartay muwaadiniinteeda in aysan u safrin Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • February 11, 2016
Wasaarada Arrimaha Dibada dalka Ingiriiska ayaa ku amartay muwaadiniinteeda inaysan u safrin dalka Soomaaliya oo ah dal ay dad badan oo haysta dhalashada Ingiriiska ay booqdaan toddobaad walba.
Booliska Ingiriiska oo baadi goobaya gabdho Soomaali ah oo la waayay
Booliska dalka Ingiriiska ayaa baadi goob ugu jira Sadex gabdhood oo Soomaali ah oo la waayay meel ay jaan iyo cirib dhigeen lana aaminsan yahay inay u safreen dalalka Syria iyo Ciraaq si ay ugu biiraan kooxda Daacish.
Ra’iisul Wasaare David Cameron oo ka hadlay guusha Xisbigiisa ka soo hooyay doorashada UK
Xisbiga Conservative ayaa ku guuleystay aqlabiyada doorashada guud ee ka dhacday dalka UK, taasoo ka dhigtay in Xisbigu uu helo kuraasta ugu badan ee Baarlamaanka UK, iyadoo tani meesha ka saartay shakigii laga qabay in Ra’iisul Wasaare Cameron aanu dib u soo laaban doonin.
David Cameron oo qarka u saaran inuu mar kale ku guuleysto doorashada UK
Ra’iisul Wasaaraha talada haya David Cameron ayaa mar kale u muuqda inuu ku guuleysanayo doorashada ka dhacday UK, kadib markii uu xisbigiisu helay 329 kuraas, taasoo ah aqlabiyada ugu badan ee kuraasta baarlamaanka.